Забур 96 CARS - Nnwom 96 AKCB
1Monto dwom foforo mma Awurade;
asase nyinaa monto dwom mma Awurade.
2Monto dwom mma Awurade, monkamfo ne din;
mompae mu nka ne nkwagye no daa daa.
3Monka nʼanuonyam wɔ amanaman mu,
monka nʼanwonwade a wayɛ wɔ nnipa mu.
4Awurade yɛ ɔkɛse na nkamfo fata no;
5Aman so anyame nyinaa yɛ ahoni bi kwa,
nanso Awurade na ɔbɔɔ ɔsoro.
6Anuonyam ne kɛseyɛ wɔ nʼanim;
ahoɔden ne anuonyam wɔ ne kronkronbea hɔ.
7Momfa mma Awurade, amanaman mmusuakuw,
8Momfa anuonyam ne din a ɛfata mma Awurade;
momfa afɔrebɔde nhyɛn nʼadiwo hɔ.
9Monsɔre Awurade wɔ ne kronkronyɛ fɛfɛ mu;
asase nyinaa momma mo ho mpopo wɔ nʼanim.
10Monka nkyerɛ aman nyinaa se, “Awurade di hene.”
Wɔabɔ asase atim hɔ pintinn, wɔrentumi ntutu;
ɔde pɛpɛyɛ bebu nnipa atɛn.
11Momma ɔsorosoro ani nnye, na asase nni ahurusi;
momma po ne mu nneɛma nyinaa nworo;
12Momma mfuw ne so nneɛma nyinaa mmɔ ose;
momma kwae mu nnua nyinaa mfa ahosɛpɛw nto nnwom.
13Momma abɔde nyinaa nni ahurusi wɔ Awurade anim, efisɛ ɔreba,
ɔreba abebu asase no atɛn.
na woabu nnipa nso atɛn wɔ ne nokware mu.
AKCB : Nnwom 96